Soo-saarista Shaxda ugu Fiican ee Soosaarka iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Qabashada Feejignaanta, Jadwalka Daabacan ee Macaamiisha Sare ee Muuqaalka Banner
Lahaanshaha shax miis waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee wax loo xayeysiiyo, laakiin taasi sidoo kale waa runtaa banner. Halkii aad ka iibsan laheyd labadaba, waxaad isticmaali kartaa banner muujinaya miiska dusha sare kaasoo ku siin doona isku darka labada. Halkii aad ka heli lahayd boodhadh muujinaya iyo boodhadhka miiska, waxaad heli kartaa hal shay oo ay kuu shaqayso haddii aad dhiirrigelinayso wax soo saar cusub, soosaarid wax soo saar, bandhig ganacsi, ama nooc kale oo xayeysiin ah u sameyso shirkaddaada.
Maro waara oo loo isticmaalo Muddo Dheer
180g Polyester Laastik ah
Boodhadhka muuqaalka sare ee miiska ayaa laga sameeyay 180g spandex polyester, 250g jilicsan oo la tolay, iyo 300D polyester. Waad isku halleyn kartaa cimri dhererkooda iyo tayadooda, waxaadna ka filan kartaa inay muuqdaan kuwo wanaagsan muddo dheer.
La soco Sawirada Crisp iyo Sharp
Habka daabacaadda dhijitaalka ah ee abuuraya astaamaha iyo macluumaadka kale ee aad ka rabto banner-ka ayaa bixin doona muuqaallo cakiran, cad, fiiqan, sidoo kale. La soco boodhadhkan, oo keen macaamiil badan adoo ka faa'iideysanaya laba nooc oo xayeysiis ah hal. Astaamahaaga iyo macluumaadkaaga astaanta ah ayaa lagu daabacan karaa miiska dusha sare ee muujinta si wax kasta oo aad bixiso aad si fudud loogu ogaan doono. Xitaa jawiga ay dadku ku badan yihiin, boorarkaada bandhig ayaa la arki karaa.
Waxaa lagu heli karaa cabirro 6ft iyo 8ft ah si aad si fudud ugu habboonaato Jadwalkaaga Dhacdooyinka
Tirada daabacadu waxay u dhaxeysaa 40 × 176 cm on banner lix-cagta ah oo dhan ilaa 160 × 236 cm on banner sideed-cagta ah. Cabbirka bannerka iyo cabirka daabacadaha ee kaladuwan ayaa ku siinaya ikhtiyaarro aad tixgeliso, si aad u hesho banner adiga kuu shaqeeya.
Shaxda Custom Top Banner
Jadwalka Miisaska loogu talagalay Bandhigyada Ganacsiga
Shaxda la rakibay waxay dabooleysaa jeexitaan
Kala Bixi Miiska Daboolaya